Go’aankii lagu joojiyay duulimaadyadii caalamiga ahaa oo maanta si rasmi ah u dhaqan galay – HalQaran.com
Go’aankii lagu joojiyay duulimaadyadii caalamiga ahaa oo maanta si rasmi ah u dhaqan galay
Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Muqdisho /Sawir hore/ Keydka HQ
Muqdisho (Halqaran.com) – Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga dhaqan galay amarkii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa.
Wasiirka duuliska hawada ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa Isniintii ku dhawaaqay in 19-ka Maarso ee maanta la joojinayo dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee imaan jiray Caasimadda Muqdisho, si looga hortago buu yiri faafida cudurka Coronavirus.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay waqti badan gelineyso sida looga hortagi karo Caabuqa Coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay, iyada oo joojisay duulimadyadaii Caalamiga ahaa, sidoo kale xirtey muddo 15 Cisho ah Goobaha Waxbarashada.
Garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ayaa saaka ilaa iyo hadda wuxuu yahay mid aysan ka soo dagin Duulimaad caalami ah, sidoo kalena aysan ka dhoofin.
Go’aanka ay dowladda Soomaaliya qaadatay ayaa waxaa sidoo kale qaatay dalal badan oo uu Cudurka Coronavirus gaarey iyo kuwo uusan weli gaarin, iyada oo laga hortagayo inuu cudurkaasi ku faafo bulshada.
Tags: Go’aankii lagu joojiyay duulimaadyadii caalamiga ahaa, si rasmi ah u dhaqan galay
Ciidamada NISA oo xiray qeybo ka mid ah waddada Maka Al Mukarama, kaddib qaraxyo lagu xiray…